Hita ho tena mavitrina amin’ny fizarana fanampiana ry zareo ireto satria tao anatin` ny herinandro dia fanintelony izao ity fikambanana ity no nanolotra fanampiana. Taorian` ny CCO COVID-19 sy ny hopitaly CHU Anosiala dia ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) indray no nisitraka izany. Nivondrona ireo mpandraharaha Sinoa ka nanolotra PPN ho an` ny CUA. Kamio lehibe efatra mitatitra vary 350 lasaka avy, menaka 312 tavoahangy isa ary savony miisa 100 baoritra no naterin` izy ireo omaly maraina tetsy amin` ny lapan` ny tanàna. Fomba iray ho an` ireo sinoa entina manaporofo ny firaisankina amin` ny vahoaka Malagasy izao fanolorana izao. « Ady iombonana ny coronavirus, tsy hisy hanaiky ho resy raha tsy miady. Vitantsika miaraka izany » hoy Sylvain Liu, solontenan` ny fikambanana « Anay ihany koa I Madagasikara. Hanohana anareo hatramin` ny farany izahay ary hanome ny herinay miatrika izany valanarenina izany»,hoy ihany izy. Ankoatra izay, ny CUA indray dia nanampy ireo voafonja ao Antanimora sy Tsiafahy noho ny fiaraha-mientana. Vary 50 gony no notolotry ny CUA ho an` ny Minisiteran’ny Fitsarana. Mandalo fahasahiranana tanteraka ny mponina ankehitriny ka tsy adino amin’izany ireo voafonja, hoy ny solontenan` ny kaominina. Mbola hisy hetsika hafa ho tanterahina ho an’ireo ankizy sy ny vehivavy voafonja, hoy hatrany ny fampitaham-baovao.